Ala akuku | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ala akuku
Otu esi akụ na-eto eto watermelons
Ajụjụ nke na-eto eto watermelons na mba na-aghọwanye ihe dị mkpa. Nke a beri bụ ụlọ nkwakọba ihe nke nri. O nwere vitamin na ihe ndị e ji amata ihe ndị bara uru na ọrịa shuga, ọrịa nke usoro obi, imeju na akụrụ, ọ bụghị ikwupụta na ọ bụ mkpụrụ osisi dị ezigbo ụtọ. Dịka ihe ọ bụla ọzọ, a na-etinye ihe na-eto eto na nkata gị ga-aba uru karịa ihe a zụrụ.
Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ ụlọ obodo, na ọbụna ebe obibi n'ime obodo, ka na-ewe iwe ọkụ site na enyemaka nke stovu nke ọkụ na-ere ọkụ. N'ihi usoro a, onye nwe ugbo nwere ọtụtụ ọkụ na uyi, nke a na-ebupụtakwa ozugbo. Otú ọ dị, a pụrụ iji unyi dịka fatịlaịza maka ubi ahụ, n'ihi ya ị nwere ike ichebe ebe ahụ site na ahịhịa na pests, yana ịhazi mmiri mmiri.
Potassium humate: mejupụtara na ngwa nke fatịlaịza
Humates bụ salts nke potassium ma ọ bụ sodium, nke a na-enweta site na humic acid. IKE NA acid bụ isi ihe dị ala, ala ya bụ humus. N'aka nke ya, humus bụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile dị n'ime ala. Nhazi nke humus na-emepụta n'ihi ngwongwo nke ihe ndị dị ndụ, sitekwa na mmiri, oxygen na microorganisms, a na-enweta mmiri.
Nitrogen nri: jiri na ibé
Nitrogen nri bụ ihe na-edozi ahụ na organic bekee nwere nitrogen ma na-etinye aka na ala iji melite zaa. Nitrogen bụ isi ihe nke osisi ndụ, ọ na-emetụta uto na mgbochi nke ihe ọkụkụ, na-eme ka ha baa uru na ihe bara uru. Nke a bụ ihe dị ike nke nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ phytosanitary sie ike, ma nye ndị ọzọ - ma ọ bụrụ na ejighị ya mee ihe.
"Na-enwu-1": ntụziaka maka iji ọgwụ
"Ntanya-1" bụ ihe ndị dị ndụ maka ịmalite ịzụlite ala, ịba ụba nke ihe ubi na igbochi ọrịa. Anyị ga-ekwu banyere nsogbu nke ọgwụ ọjọọ, iwu nke ngwa na usoro onunu. Kedu ihe bụ "Nkwadebe-ọkụ" nke eji eme ihe na ihe dị irè? A na-eji nkwadebe eme ihe maka ịkọ mkpụrụ osisi dị iche iche na mkpokọta mgbọrọgwụ nke osisi ndị a kụrụ n'ubi, mmiri irighiri mmiri na nri ọzọ.